Ndụmọdụ 5 iji nọgide na-arụpụta ihe mgbe ị na-arụ ọrụ site na ụlọ - LucidPix
Usoro ise iji dị ndụ mgbe ị na-arụ ọrụ site n'ụlọ
Ka etinyerekwu ihe mgbochi n’ụlọ-nso n’uwa niile, ọtụtụ ụlọ ọrụ emejuola atụmatụ ọrụ dịpụrụ adịpụ. Nke a na-eme ka ọtụtụ n'ime anyị na -akpata ọnọdụ pụrụ iche: ịrụ ọrụ n'ụlọ. Ndụmọdụ ise a ga-enyere gị aka ijide n’aka na ị ga na-arụ ọrụ n’ụlọ ma na-echekwa ọdịmma uche gị.
Nke 1: Jikere Maka Ọrụ
Iji nọgide na-amị mkpụrụ n'ụlọ, ịchọrọ iicomi ụbọchị ọrụ gị oge ọ bụla ị nwere ike. Bido ụbọchị gị n’otu usoro ị ga-eso ma ọ bụrụ n’ị na-aga ọrụ. Nke a dị ezigbo mkpa n'oge ọrịa a, n'ihi na enweghị usoro a na-eme kwa ụbọchị na-eme ka ọtụtụ ndị na-elepụ anya na ndụ ha na-ebi.
Mee ihe ị ga - eme tupu arụ ọrụ, dị ka ime kọfị, yi uwe, ma ọ bụ were nkịta gị na ije. Site n’iso gị 'Ịkwadebe' usoro, ị na-ahapụ onwe gị ka ịdị njikere ma nwee ahụike maka ọrụ gị ụbọchị n'ihu, ọbụlagodi na ọ ga-eme n'ụlọ.
Nke 2: Họta Ebe Mkpa Homelọ
Ọtụtụ mmadụ enweghị ike ịnọgidesi ike n'ụlọ maka na ha na-eme ihe niile n'agbata ụlọ na ọrụ. Dịka m kwuru na mbụ, ọ dị mkpa ịnwa ime ka ezumike gị dị ka o kwere mee. Yabụ, ọ bụrụ na-arụrụ gị n'ọfịs anụ ahụ, guzobe ebe ana aru aru n’ụlọ dị ka nke ọma.
Tọghata gị zuo ụlọ n’ime ụlọ ọrụ site na ịtinye tebụl na ngwongwo, ma ọ bụ na-arụ ọrụ site na a dị jụụ n'akụkụ ụlọ gị. Agbanyeghị na ịtọbere ebe ọrụ gị, hụ na ị na-agbanwe agbanwe n'iji oghere a kwa ụbọchị. Wayzọ a, mgbe ị banyere ebe ọrụ gị, uche gị ga - achọpụta na oge eruola itinye uche wee gbadaa ọrụ.
Ndụmọdụ 3: Nọgide Na-arụ Ọrụ Kwa Frombọchị Site N’usoro Homelọ
Mgbe ị nọ n'ụlọ, ọ nwere ike isiri gị ike idebe ọrụ ị ga-arụ ụbọchị niile. Rịba ama ihe ndị kacha gị mkpa na oge ị ga - emecha site na ịmepụta usoro n'ime gị onye nhazi kwa ubochi, nke ahụ na-akọwa ọrụ ị ga-arụ na mgbe ị ga-arụ ya. Nwere onwe gị ịtinye ihe ndị na-abụghị ọrụ na nhazi oge gị, dịka ọrụ ụlọ ọ bụla. Nwere ike iwere ya otu nzọụkwụ ọzọ site na isetịpụ ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ obere oge maka ọrụ ọ bụla. Gbado anya na ịmechaa ọrụ ọ bụla otu oge ma gafere ya na nhazi oge ị rụchara ya.
Nke 4: Ekwela Ka Oru rie Gị
Maka ụfọdụ ndị, ịrụ ọrụ site n'ụlọ nwere ike iweta ihe ndọpụ uche. Ka osi di, ihe ozo di nma maka otutu mmadu. Ọ bụrụ n’ịhụ na-arụ ọrụ n’ụlọ anaghị enwe ndọpụ uche, ị nwere ike ịna-arụ ọrụ karịrị akarị, nke nwekwara ike igbochi arụpụtaghị gị.
Anyị na-akwado ịhazi ụbọchị ọrụ gị site na ịme ihe ndị na-abụghị ọrụ iji mebie ncheta ụbọchị ọrụ gị. Nke a nwere ike ịdị ka ihe anaghị arụ ọrụ, mana isonye na ihe ndị na-abụghị ọrụ nwere ike ịbawanye oke okike gị. Were ebe a na - enwe ntụrụndụ ọhụụ, ma ọ na - esi nri, nka, ma ọ bụ na - emekwuwanye foto gị LucidPix.
Nkeji 5: Nọgide Na-arụ ọrụ Mgbe Working Na-arụ Fromlọ
Ugbu a ụlọ ọrụ gị niile na-arụ ọrụ site n’ụlọ, enweghị mmekọrịta gị na ndị ọrụ ibe gị nwere ike ime ka owu ghara ịma gị. Iji lụso mmetụta a, gwa ndị ọrụ ibe gị, ndị enyi gị, na ndị ezinụlọ gị ederede na vidio ozi. Ọ bụrụ na ị naghị akwado ịhapụ ụlọ gị n'oge ọ bụla, mmekọrịta mmekọrịta ndị a na-ewu ewu nwere ike ịga ogologo ụzọ.
Ọ dịkwa mkpa ijikọ ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị nwere ike na-eche oge a, ọkachasị ebe ọ bụ na ịnọ na iche iche nwere ike iwulite mmetụta ndị a. Ugbu a, karịa mgbe ọ bụla, ọ dị mkpa na anyị ga -achọta, chọpụta ma lekọta ibe anyị.
← Atụmatụ ahụike maka ahụike